AGROTECHNICS SII KORDHAYA MARO: XEERARKA BEEREED IYO DARYEELKA - BACRIMINTA KARASHKA
Iibinta bakeeriga dukaanka iyo cunista boorashka xayawaanka ah, xitaa kama fekerin su'aasha sida geedka sidan u koraayo iyo marxaladaha qashin-qubka u socda intaanay helin qalabka dukaanka. Ka fiirso faahfaahin waxa barkudku yahay, sida ay u koraan, iyo sida ay muhiim ugu tahay marxalad kasta oo ay ku jirto beerista baqdi.
Noocyada bayoolojiga ee kaabajka
Warshad cagaaran ayaa iska leh caanaha Fagopyrum Mill. Cannaanka barkingu wuxuu ka kooban yahay in ka badan 15 nooc oo ka tirsan qoyska Buckwheat. Mid ka mid ah noocyada ayaa leh barkada magaca. Geedkan waa dalag dalagga. Wareeg dhuleed - Waqooyiga Hindiya iyo Nepal. Waxaa loo yaqaan 'bariis madow'. Waxaa lagu soo bandhigay dhaqanka in ka badan 5 kun oo sano ka hor. Sida laga soo xigtay hal version, buckwheat yimid Europe Yurub inta lagu guda jiro duullaanka Tajik-Mongol. Ka mid ah dadka Slavic waxay heleen magaca buckwheat ka dhalatay sahayda Byzantium ee qarnigii VII.
Buckwheat waa warshad sanadle ah oo uu leeyahay sharaxaad fudud.
Nidaamka Rootka waxay ka kooban tahay asalka asalka leh geedi socodka wakhti dheer. Way liidataa marka la barbardhigo dhirta kale. Shaqada qaybta sare ee xididdada warshadu waa isuduwidda nafaqooyinka ee ciidda, qaybta hoose - biyaha biyaha ee warshadda. Nidaamka asaasiga ah wuxuu kobcaa muddada koritaanka oo dhan.
Baalduurka barkadda jeexdin, godan, lafdhabaxyo, 0.5-1 m oo sare, 2-8 mm qaro, cagaaran ee dhinaca hooskii iyo guduud guduudan dhinaca qorraxda. Dabeecadaha cufan, dhuuban, si fudud ayaa u waxyeeleeyaa dhaxan iyo kan ugu horreeya ee ku dhaca abaarta.
Ubaxa lagu ururiyey inflorescences ee midab cad ama cawlaan casaan. Muujin bisha Luulyo, waxay leeyihiin ur aan dabiici ahayn oo soo jiidata shinni.
Leaves kala duwan: cotyledon, sessile, petiolate. Midhaha badiyaa waa qaab saddex-gees ah. Iyada oo ku xiran nooca feeraha iyo cidhifyada midhaha, caleemaha cagaaran, kuwa aan lafdhabar lahayn iyo dhexdhexaad ah ayaa kala duwan. Midabka miro waa madow, brown, lacag. Cabbirka miro ayaa ku xiran noocyada kala duwan ee kalluunka iyo xaaladaha sii kordhaya. Miro ayaa lagu daboolaa qolof cufan, taas oo si fudud loo kala soocayo.
Caano: shaqaynta iyo bacriminta
Wax soo saarka beeraha sii kordhaya waxay ku xiran tahay cimilada iyo carrada. Waxsoosaarka ugu sareeya waxaa lagu arkay kaynta-kore iyo Polesye. Warshadu waxay ku kori kartaa carrada kala duwan, laakiin si loo gaaro waxtarka waxaad u baahan tahay in aad ogaato in buckwheat jecel yahay carrada in si deg deg ah loo kululeeyo oo ay ku filan yihiin cillado oksijiin iyo nafaqooyin leh falcelin daciif ah ama dhexdhexaad ah (pH 5.5-7). On culus, xayawaanka dildilaaca u nugul dabaasha, wax soo saarka beerashada noqon doonaa ugu yaraan.
Nidaamka abuurka ee kabridda ayaa laga yaabaa inay ka duwan tahay. Qoto dheer ee beerista ciidda iyo wakhtiga daaweyntiisu waxay ku xiran tahay xaaladaha cimilada iyo dhaqanka ka hor. Tan iyo markii laga goosan yahay dhaqanka beeraha goor dambe, hawsha ugu muhiimsan inta lagu jiro beerashada waa ugu yaraan qoyaanka, dhalinta abuurka miraha si ay u biqilaan xilliga abuurka, abuurista qaab ciid ah oo wanaagsan iyo isku xirnaanta.
Bacriminta saxda ah ee ciidda waa mid ku habboon in kor loogu qaado dhalidda dalagga. bakeeriga Si aad u sameysid 1 mitir oo ah hadhuudh, geedka wuxuu ku baabbi'iyaa 3-5 kg ​​of nitrogen ka soo ciidda, 2-4 kg ee fosfooraska, 5-6 kg oo ah potassium. Sidaa darteed, nidaamka bacriminta dhirta waa inay ku saleysnaadaan hab isku dheelitiran oo ku salaysan cilmibaarista ciidda. Tani waxay tixgelineysaa baahida loo qabo nafaqooyinka warshad gaar ah iyo isticmaalka walxahan kuwaas oo goosashada mustaqbalka. Waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado in Bacriminta fosfate iyo potash ah lagu dalbado firileyda inta lagu jiro xilliga dayrta ama marka beeritaanka abuurka, Bacriminta nitrogen - guga inta lagu jiro beerista ama sida labiska.
Xilliga ugu wanaagsan ee loogu talagalay bacrimin nitrogen ah ee loogu talagalay kabrid waa muddada gaysashada. Nitrogen macdan wuxuu hagaajiyaa tilmaamayaasha tayada ee hadhuudhka: wuxuu kordhiyaa baaxaddiisa, wuxuu hagaajiyaa ka kooban kiimikada wuxuuna yareynayaa filimada. Heerka Nitrate ammonium per dressing top waa 60-80 kg / ha. Waa in la ogaadaa in for chernozem iyo chestnut carradu farsamadan farsamada ee beerista of buckwheat lahayn wax codsi ah ee technology ee beerista. Meelaha waqooyiga, dhammaan noocyada Bacriminta macdanta ayaa la isticmaali karaa inta lagu jiro beerashada gu'ga, iyo Bacriminta granibyada culus - inta lagu guda jiro beerashada.
Waa muhiim! Bacriminta oo ay ku jiraan chlorine ayaa lagu dabaqaa xilliga dayrta, haddii loo baahdo, tan iyo barkudhadu waxay si xun u falgalaan iyaga.
Waa in aynaan ilaawin muhiimada ay leedahay Bacriminta dabiiciga ah iyo caws, caws iyo hadhuudhka, taasoo ah arrin ku jirta dhalida walxaha dabiiciga ah ee carrada. Sidoo kale Dalaggu wuxuu u baahan yahay maadooyin: manganese, zinc, copper, boron. Waa mid aad waxtar u leh geedi socodka beeridda. 50-100 g of manganese sulphate, 150 g of boric acid, 50 g of zinc sulphate loo baahan yahay 1 tan oo miraha.
Kuwa ka soo horjeeda ee wanaagsan iyo kuwa xun
Si loo gaaro bajo koronto sarreeya waa in ay tixgelisaa booskeeda wareegga. Sannadaha waaya-aragnimada iyo cilmi-baarayaasha cilmi-baaristu waxay cadeynayaan Meelaha ugu fiican ee kabridda waa dalagyada xilliga qaboobaha, digirta, iyo dalagyada la beeray. Laguma talinayo in la beero dalagyada miraha ka dib, iyadoo ay jirto faddar sare oo ciidda leh haramaha, taasoo si xun u saameeysa dhalidda. Dhirta ka dib, dhalidda qumbaha waxay kor u kacdaa 41%, ka dib marka la cuno - 29%, baradhada - 25%, galley qaboobaha - 15% ka dib, dhalatada, waxsoosaarku wuxuu yareeyaa 16%, miro - 21%.
Way fiicantahay in lagu beero maraq ka dib markii la beeray: sonkorta sonkorta, silage galley, baradho, qudaar. Xilliga jiilaalka ka dib, kabridda sidoo kale si fiican ayey u koraan. Waxay isticmaashaa Bacriminta dabiiciga ah iyo macdanta oo la adeegsaday dalaggii hore. Si kor loogu qaado wax soo saarka beeraha, cawska oo la dhex geliyo ciidda dalagyada hore ee dalaggu waxaa loo isticmaalaa bacrimin kale. Sida horay u wanaagsan oo loogu talagalay marmarsiiyo, dhaqanka miraha ah ee noocyada dambe ee la isticmaalo: Vetch, lakabka ah cawska dilka ah, soodhaha.
Waa muhiim! Hoosudhaca bajiga ayaa la beeray ka dib markii baradho nadiif ah, ama miro, oo si weyn loo yareeyo.
Saynisyahanada qaar ayaa aaminsan joogitaanka hufnaanta saafiga ah ee isku xirka wareegga dalagga ayaa si weyn u kordhiya dhalidda of buckwheat marka la barbardhigo xiriirada aan-uumi-la'aanta ah. Dalag soo noqnoqda oo ka mid ah duubista ayaa horseedaya hoos u dhac ku yimid dhalid 41-55%. Marka la sameynayo cilmi-baarista, saamiga ugu sareeya ee isku-xidhka lamaanaha - digir - karabe iyo ugu yaraan saddex sano oo soo noqnoqonaya beerashada ee loo yaqaan 'buckwheat' ayaa la aasaasay.
Bacriminta waa dalag faytowiin ah. Haddii ka dib markii uu ku beeranayo dalaggu badhkiis, waxyeelada caleemaha xididkoodu wuxuu hoos u dhigi doonaa 2-4 jeer marka la barbardhigo beergooyska ka dambeeya kuwa hormoodka ah. Sababtoo ah qaab dhismeedka xididadiisa, buckwheat ayaa yaraynaya cufnaanta carrada. Tani waxay saameyn wanaagsan ku leedahay koritaanka dalagyada beeraha kadib.
Doorashada saxda ah ee noocyo dhirta iyo diyaarinta miraha beeritaanka si weyn u kordhiyaan dhalidda ee dalagga.
Daaweynta bacriminta miraha beerista waxay bixisaa jeermi-dilista cudurada, hagaajiso biqilka iyo qaadataa 1-2 toddobaad ka hor beerashada. Sida filim hore loo isticmaalo xalalka aqueous ee xabagta. Waxay ku daraan daawooyinka "Fenor", "Vitatiuram", "Roxim", "Fundazol" sida waafaqsan tilmaamaha ugana soo qaad qashinka miraha leh habka qoyaanka ama ka-joojinta aqueous. Cayayaanka iyo cudurrada kabridda, sida caaryada cawliga, caarada, iwm. Tani waxay si weyn u saameeysaa kordhinta soo saaridda.
Taariikhda la beerto
Waxaa lagama maarmaan ah in lagu beero buckwheat sida ugu dhakhsaha badan ciidda kulaalaa si qoto dheer ah 10 cm ilaa 10-12 ° C iyo khatarta ah ee dhaxan guga ka gudbaan. Waqtiga hore ee beeridda wuxuu ku kordhiyaa biqilka saaxiibtinimo ee abuurka, isticmaalka qoyaanka ciidda qoyaanka caleemaha yar yar iyo daaqsashada hore ee dalagga. Tani, marka hore, waxay hagaajin doontaa shuruudaha nadiifinteeda. Celcelis ahaan, waxaa lagama maarmaan ah in lagu beero dalagyada dalagga ee tallaabada labaad ee - tobankii sanno ee saddexaad ee April, aagga kaynta-steppe - qeybtii hore ee May, ee Polesie - ee tobanka sano ee saddexaad ee May.
Ma taqaanaa? Dad badan ayaa xiiseynaya in ay isbeddel ku yimaadaan marka la eegayo baqsinnada iyo baqdinta, ama erayadani waa isku mid. Magaca asalka ah waa bajar. Ereygan macnaheedu waa dhirta lafteeda iyo miraha ka soo baxa. Buckwheat waa erey deris ah oo ka soo baxday nuqul ka mid ah fududaynta iyo fududaanta. Bacaha waxaa badanaa la yiraahdaa jajabyo.
Beerka lagu beerayo: Qorshaha, qiyaasta taranka iyo qoto dheeraynta abuurista
Si dhakhso ah ayuu u kobciyaa sprouts, waxay sii kordhineysaa dhibta cawska oo si weyn u kordhisa dhalidda. Diyaarinta ciidda loogu talagalay beerashada buckwheat wuxuu ka kooban yahay daaweyn aasaasi ah iyo daaweyn. Waxaa la fuliyaa iyada oo la tixgelinayo dalagyada hore, qaabka ciidda, heerka qoyaanka ciidda, qashin qubka ciidda. Natiijooyinka ugu fiican ee horumarinta baqsaaqda ah ee muddada bilowga ah ee koritaanka waxay muujinaysaa tayada ciidda, iyo sidoo kale beerista ee gogol-xaarasho leh roogeeye saafi ah.
Ka hor inta aan beeran karno, Waxaa lagama maarmaan ah in la doorto qorshe beereed: caadi ah, ciriiri-isku dhafan iyo safaf ballaaran. Habka ballaaran ee loo adeegsado ayaa loo adeegsadaa marka la beero noocyada dhexdhexaadka ah iyo dabaqyada dambe ee carrada bacrinimo leh. Xaaladdan oo kale, daryeelka wakhtiga ah ee dhirta ayaa kaalin muhiim ah. Habka caadiga ah waxaa loo isticmaalaa on carrada leh bacriminta yar, on carradu iftiin iyo kuwa aan saline ahayn, marka beero hore noocyo. Tan iyo dhirta waxaa loo qaabeeyey in ay branching, waa in la beeray si joogto ah oo siman.
Heerka soo saarista ee abuurka ku jira waxay ku xiran tahay arrimo badan: dhaqanka beeraha ee gobolka, qaababka cimilada. Iyadoo habka ballaaran-, isticmaalka ugu wanaagsan ee abuur ah buckwheat waa 2-2.5 million pcs. / ha, oo leh qaas ah - 3.5-4 milyan oo unug. / ha Marka dalagyada la gooyo, dhirtu waxay u koraan khafiif, waxay leeyihiin dheelitir hooseeya oo ah ozarennosti, dalaggu waxay u nugul yihiin hoy. Dalagyo aan walwal ah ayaa sidoo kale si xun u saameeya dhalidda of buckwheat. Sidaa darteed, sicirka abuurka waa in lagu xisaabiyaa iyadoo lagu saleynayo qodobada: nidaamka beeridda, qoyaanka ciidda, noocyada ciidda, sifooyinka miraha.
Marka heerka qiyaasta caadiga ah ee loo yaqaan 'seeding' waa inay ahaataa 30-50% ka badan marka loo eego qulqulka ballaaran. Wakhtiga qalalan, qiimaha waa in la yareeyaa, iyo muddada qoyan - ayaa kordhay. On carrada bacrin ah, sicirka waa in la yareeyo, iyo carradu inferiil - si loo kordhiyo. Marka beeritaanka abuurka leh biqilka yar yahay, qiimaha ayaa kor u kacay 25-30%.
Qodashada qoto dheer waa muhiim. Dhirta dhirta waxay leeyihiin xididada daciifka ah, sidaa daraadeed way adagtahay in ay jebinayaan ciidda oo ay ka soo saaraan sirlidoono leh xiniinyaha miraha. Sidaa darteed, si ay u ah caleemaha caws ah si ay u noqdaan kuwo la aqbali karo oo si siman u bislaaday, waxaa lagama maarmaan ah in lagu abuuro abuur ah ee ciidda qoyan si qoto dheer. In carradu culus si qoto dheer ah 4-5 cm, carrada lagu beeray - 5-6 cm, oo leh daaha sare ee qalalan - 8-10 cm. Sida laga soo xigtay saynisyahano, Dheeraadka dheeraadka ah ee mugooyinka buckwheat waxay hagaajinaysaa kobcinta dhirta waxayna leedahay saameyn togan oo ku saabsan tirada inflorescences iyo macdanta.
Ma taqaanaa? Wax cunto ah laguma barbardhigi karo marka la isku qalajiyo qiyaasta quercetin bioflavonoid (8%). Waxay joojisaa isku dhufashada unugyada kansarka waxayna keenaysaa dhimashadooda.
Daryeelka dalagyada la isku qurxiyo
Wixii horumarinta geedo wanaagsan waa muhiim si ay u ilaaliyaan qoyaanka ee ciidda. Waxyeelo aad u weyn oo ku saabsan tani waa soo rogista dalagyada. Xakamaynta weelka waxaa si fiican loo qabtaa mehanka. Ka hor inta uusan soo bixin geedo, waxaa lagama maarmaan ah in la yareeyo dalagyada. Si loo wanaajiyo koritaanka iyo horumarinta dhirta waxaa lagama maarmaan ah in la hubiyo in si habboon loo daboolo safafka. Hagaajinta nidaamka biyaha iyo hawada ee ciidda, waxay sameeyaan daaweynta labaad ee u dhaxaysa safka marxaladda gaduudan. Waxaa lagu daraa nafaqada dhirta.
Daryeelidda dalagyada waxaa ka mid ah cudurrada cayayaanka iyo kabadhada. Hababka bayoolojiga ee xakamaynta waxaa ka mid ah taranta cayayaanka, fungi, bakteeriyada aan saameyn karin caleemaha oo saameyn ku yeelan kara arrimaha la xariira. Waxa kale oo lagama maarmaan ah in la kordhiyo tartanka tartan ee buckwheat by abuuritaanka xaalado wanaagsan oo korodhsanaya. Hababka xakamaynta kiimikada waa in la isticmaalaa marka dalagga aan lagu badbaadin karin hab kale. Herbicides waxaa loo isticmaalaa walxo kiimikaad. Waa in la fahmo in ay jirto xaalad dhaqaale oo halis ah. Heerka qashinka waa in ay ahaadaan sida isticmaalka herbicides ay noqon doonto mid kharash badan.
Muhiimadda weyn ee nidaamka daryeelka ee dalagyada ka mid ah xayawaanku waa bixinta gumeysiga shinni ah beerta marka ubaxyada qaxwada. Mastaradda Honey waa 80-95% pollinated by bees, sidaas darteed waxaa lagama maarmaan ah maalin ama laba kahor intaadan ubaxin meel u dhow beeraha si loo dhigo finan yaryar ee qiyaasta 2-3 deegaan shinni ah 1 ha.
Marka dhirta brown 75-80% ay bilaabaan nadiifinta baqdi. Waxaa loo qabtaa 4-5 maalmood. Heerka sare ee dhirta waa in ay ahaataa 15-20 cm. Habka ugu muhiimsan ee loo guran karo kabridda waa gooni. Xaaladdan oo kale, xajmiga canqowga ayaa soo baxaya 3-5 maalmood, si fudud ayaa loo tumaa. Faa'iidada habkani waa hoos u dhac ku yimaada khasaare soo gaara, daaqa miraha cagaaran, hagaajinta tayada miraha, iyo maqnaanshaha qalajinta dheeriga ah ee hadhuudh iyo caws. Habkani wuxuu hagaajiyaa tayada farsamada iyo abuurka ee hadhuudhka iyo hagaajinta amniga.
Haddii dalagga uu yahay mid khafiif ah, hooseeya, xoqan, hab wax lagu goosan karo ayaa si toos ah isugu xira. Xaaladdan oo kale, hadhuudhku wuxuu leeyahay qoyaan badan, oo si liidata uga soocaya haramaha.
Ma taqaanaa? Buckwheat wuxuu leeyahay saameyn bogsashada jirka bini'aadamka: waxay kordhisaa hemoglobin, waxay xoojisaa derbiyada xididdada dhiigga, sidaas darteed ka hortagga dhiigbaxa. Ujeedooyinka daaweynta, waxaa lagu talinayaa in la cuno midho dhalaalay. Dhibaatooyinkooda ku saabsan jirka waxay muujinayaan natiijada isticmaalka dheeraadka ah iyo isticmaalka. Kabacdi xabbadeysan ee xaddiga 1 qaado oo shub ah waa in la calaliyo 1 daqiiqo, samaynta 50-60 dhaqdhaqaaqa.
Kala shaqeynta iyo kaydinta bakeeriga
Marka goosashada la goosto beergooyska ayaa la nadiifiyaa iyadoo la adeegsanayo mashiinka nadiifinta hadhuudhka oo la qalajiyey isla markiiba goosashada. Nadiifinta nadiifinta waxay keeni doontaa hadhuudh si aad u kululaato. Nadiifinta miraha waxaa lagu fuliyaa saddex marxaladood: horudhac, horudhac, iyo labaad. Waxaa lagu sameeyaa mashiino noocyo kala duwan ah.
Xajinta saafiga sare waxaa lagu bixiyaa qalajinta illaa qoyaanka 15%. Midhaha dalagga waxaa lagu kaydiyaa qolka qalalan ee bacaha wax lagu duubo. Dufc kasta wuxuu si gooni ah ugu duubnaa qoryaha alwaax. Heerka xayawaanka waa inuusan ka badnayn 8 bacda oo dherer ah iyo 2.5 m width. Marka lagu kaydiyo bulkum, dhererkoodu wuxuu noqon karaa ilaa 2.5 m.
Bacriminta bacriminta, loogu talagalay isticmaalka aadanaha, ayaa loo qaadaa si loo dhajiyo geedo gaar ah. Waxay sameeyaan nadiifinta hadhuudhka, farsamaynta nukliyeerka, kala soocida jajabyada, diirinta, kala-soocida alaabooyinka kama dambaysta ah. Haddii aan la isticmaalin wax-soo-saarka hydrothermal ee hadhuudhku wuxuu heli karaa midab cad. Ka dib markii si faahfaahsan loo baaray sida loo beerayo uguna kicin karno, waxaan si kalsooni leh u dhihi karnaa in ay ka mid tahay dhaqamadaas aan ogoleyn in lagu xadgudbo tayada farsamada. Dhammaan marxaladaha beerashada ee buckwheat waa u dhigma. Sidaa darteed, si aad u hesho dhalidda sare Xaqiijinta waajibka ah ee dhismaha agrotechnik oo dhan waa lagama maarmaan.